TORA F-16 Kurwisa Falcon FSX & P3D - Rikoooo
F-16 Kurwisa Falcon FSX & P3D
Downloads 52 730
Created 19-09-2014 02: 00: 00
Akachinja 30-05-2015 19: 13: 05
Munyori: Kirk Olsson
wedzera-mberi zvinoshamisa kuchinjwa kushanda zvakakwana FSX uye P3D, modeling kubudikidza Kirk Olsson zvinoshamisa. muenzaniso uyu (bwechiva) kunouya 22 textures uye 4 yokutevedzera. Afterburner kushanda uye vakagarwa zvikamu varipo, tsika ruzha, gauges, rakapotsa Cockpit, hud the, 2D Panel.
The General Dynamics F-16 Fighting Falcon chinhu multirole murwi yakatanga neUnited States mumakore 1970s Vakarayirwa kupfuura 20 nyika, yakavakwa pasi rezinesi muTurkey, South Korea, uye boka munyika ina NATO F-16 muna 2013 ndiye murwi zvikuru kushandiswa munyika, maererano nokumwe kufungidzira, 2,309 ndege mubasa iri 2012 kana 15% vose revarwi ndege munyika. 4 500th kopi wanunurwa muna April 2012 uye kugadzirwa anotarisirwa kuramba zvinenge kusvikira 2017 nokuda ekisipoti. (Wikipedia)
1. Zvizere vawedzere ichibhabhamisa (F8).
2. Activate yokupakira akamedura uye vanosundira throttle kuti simba zvizere. Bata dzakapasanura nokuti 2-3 mumasekonzi (kuvaka simba).
3. Tisunungurirei akamedura uye tenderera pana 125-135 nokusunungura mapfundo.
1. Usanyanya kukwira 340 nokusunungura mapfundo vane airbrake (/).
2. Vawedzere ichibhabhamisa kuti zvizere (F8). Chinja pakukurumidza throttle uye airbrake kuramba uri kubhururuka zvine pamateru.
3. Approach runway kumativi 200 nokusunungura mapfundo.
4. Just pamberi runway panguva inenge 165 nokusunungura mapfundo anomunzwira airbrake (/), namo mhino kumusoro
uye kuwedzera throttle yokurembedza dzinza.
5. Chekai throttle uye touchdown pakati 145-155 nokusunungura mapfundo.
6. Bata zvakanaka mhino nenamo kusvikira ichimhanya rashayiswa kuti pakati 130-140 nokusunungura mapfundo.
Zvadaro zvishoma nezvishoma kudzikisa mhino uye kushandisa akaputsa pakati 100-120 nokusunungura mapfundo.
F-16 Kurwisa Falcon FSX & P3D Download
Downloads: 42 012
Lockheed Martin C-130J-30 nokuda FSX
Downloads: 24 835